မတ်, 1906 ။
ဘယ်လိုကြှနျုပျတို့နောက်ဆုံးလူ့ဇာတိဖြစ်အရာကိုပြောပြနိုင်မလား? တစ် ဦး ဟောပြောပွဲပြီးနောက်တစ်ညaည့်သည်ကိုမေးတယ်။
ပြောရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာကျွန်ုပ်တို့ယခင်ကမည်သူနေထိုင်သည်ကိုအကောင်းမြင်ရန်ဖြစ်သည်။ ဒီအသိပညာလာသောအားဖြင့်အဆိုပါဒြေပိုမိုမြင့်မားသောအမိန့်၏မှတ်ဉာဏ်သည်။ ထိုအရာမရှိသောကြောင့်တစ် ဦး ချင်းအနေနှင့်သူယခင်ကရှိခဲ့သည့်ခန့်မှန်းမှုများအားသူယခုသူကြိုက်သည့်အရာနှင့်ဖွဲ့စည်းနိုင်သည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤကိစ္စတွင်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုခုရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏အရသာသို့မဟုတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်မကိုက်ညီသောအခြားအခြေအနေများတွင်ကျွန်ုပ်တို့လာမည့်အခြေအနေသို့မဟုတ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုရွေးချယ်မည်မဟုတ်ဟုယူဆခြင်းသည်ကျိုးကြောင်းဆီလျော်ပါသည်။ ငါတို့မှာရွေးချယ်စရာလမ်းမရှိဘူး၊ ဒါဆိုလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးကိုအုပ်ချုပ်တဲ့ဥပဒေကကျွန်တော်တို့ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်မသင့်တော်တဲ့အခြေအနေတွေထဲရောက်အောင်မပို့ဘူး။
အချို့သောစံနမူနာများ၊ ဇာတ်ကောင်များ၊ လူတန်းစားများ၊ လူအမျိုးအစားများ၊ လက်မှုပညာများ၊ အလုပ်အကိုင်များ၊ အနုပညာနှင့်အလုပ်အကိုင်များကိုကျွန်ုပ်တို့စာနာမိပြီးဆန့်ကျင်သည်ဟုခံစားရသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကောင်းမွန်သော (သို့) မကောင်းသောလူ့ဘောင်အတွင်း၌အိမ်တွင်နေရလျှင်သို့မဟုတ်သက်သောင့်သက်သာမရှိလျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အရင်ကတွေ့ခဲ့ဖူးသောအရာကိုညွှန်ပြလိမ့်မည်။ ဆိပ်ခံတံတားဟောင်းသို့မဟုတ်ဖုန်ထူသောလမ်းတစ်လျှောက်တွင်မိမိကိုယ်ကိုပျင်းရိစွာလှည့်စားလေ့ရှိသည့်ရဲရင့်ခြင်းသည်ယဉ်ကျေးသောလူ့ဘောင်အဖွဲ့အစည်း၊ ဓာတုဗေဒဓာတ်ခွဲခန်း၊ တက်ကြွလုံ့လဝီရိယရှိသောသူဖြစ်ခြင်း၊ နည်းစနစ်အရသို့မဟုတ်အတွေးအခေါ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရလိုလိုလားလားမရှိသူသည်လည်းမိမိကိုယ်ကိုသက်သောင့်သက်သာမရှိ၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်အတိတ်ဘ ၀ ၌ရှိခဲ့သောအရာများကိုမျှတစွာတိကျမှန်ကန်စွာဖြင့်လက်ရှိစည်းစိမ်ဥစ္စာသို့မဟုတ်ရာထူးအားဖြင့်မဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏စိတ်ဆန္ဒ၊ ရည်မှန်းချက်၊ အကြိုက်၊ မနှစ်သက်မှု၊
ခန္ဓာကိုယ်ကမွေးပြီးခန္ဓာကိုယ်ကသေတယ်။ ၀ ိညာဉ်သည်မွေးဖွားခြင်းလည်းမဟုတ်၊ မသေလည်း၊ မွေးဖွားပြီးကိုယ်ခန္ဓာသေပြီးနောက်ခန္ဓာကိုယ်မှထွက်ခွာသွားသည့်ကိုယ်ခန္ဓာထဲသို့ဝင်စားသည်။
ဤကမ္ဘာတွင်လူတစ် ဦး သည်မည်မျှနေထိုင်ခဲ့သည်ကိုသိရန်ယခုကမ္ဘာပေါ်ရှိကွဲပြားခြားနားသောလူမျိုးများကိုကြည့်ပါ။ အာဖရိကသို့မဟုတ်တောင်ပင်လယ်ကျွန်းသားတစ် ဦး ၏ကိုယ်ကျင့်တရား၊ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် ၀ ိညာဉ်ရေးရာတိုးတက်မှုကိုစဉ်းစားပါ။ ထို့နောက်နယူတန်၊ ရှိတ်စပီးယား၊ ပလေတို၊ ဗုဒ္ဓသို့မဟုတ်ခရစ်တော်တို့၏။ ဤအစွန်းရောက်မှုများအကြားလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်တင်ပြသောဖွံ့ဖြိုးမှုအဆင့်အမျိုးမျိုးကိုစဉ်းစားပါ။ ဒီပြီးနောက်ဒီအစွန်းအကြားအဘယ်မှာရှိငါ“ ငါ” ဘယ်မှာရပ်သလဲဟုမေးပါ။
ပျမ်းမျှအနေအထားကိုလေ့လာပြီးနောက်“ ငါ” သည်လက်ရှိဘ ၀ ၏အတွေ့အကြုံများမှသာမန်လူတစ် ဦး သင်ယူသော်လည်းအနည်းငယ်သာ၊ “ ငါ” ငါလေ့လာသိရှိခဲ့ရာကိုမည်သို့ပြုမူသည်ကိုကြည့်ပါ။ ဤစိတ်ဝင်စားဖွယ်မေးခွန်းပြီးနောက်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိအခြေအနေကိုရောက်ရှိရန်အတွက်အသက်ရှင်ရန်လိုအပ်သောအကြိမ်အရေအတွက်နှင့် ပတ်သက်၍ အချို့သောအတွေးအခေါ်ကိုပုံဖော်ကောင်းဖော်ထုတ်လိမ့်မည်။
လူတစ် ဦး တစ်ယောက်အနေဖြင့်သူယခင်ကမည်မျှနေထိုင်ခဲ့သည်ကိုအတိတ်မှအမှန်တကယ်ဗဟုသုတနှင့်ဆက်လက်သတိရှိခြင်း မှလွဲ၍ မည်သူမျှမပြောပြနိုင်ပါ။ အကယ်၍ သူသည်နှစ်ဆ (သို့) နှစ်သောင်းငါးသောင်းနေထိုင်ခဲ့သည်ဆိုပါကသတင်းအချက်အလက်သည်သူအားအကျိုးမရှိနိုင်ကြောင်း၊ သူ၏စိတ်ဝိညာဉ်မှလာသည့်အသိပညာ မှလွဲ၍ ၎င်းကိုအတည်ပြုနိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်ဖော်ပြထားသောပုံဥပမာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်ရှိအခြေအနေသို့ရောက်ရှိလာခဲ့သည့်နှစ်သန်းပေါင်းများစွာ၏စိတ်ကူးအချို့ကိုဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
ကြှနျုပျတို့မှာ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းရှိနေစဉ်အတွင်းကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သတိမပြုမိပါ။ ဤကမ္ဘာကြီးသည်လုပ်ဆောင်မှုနယ်ပယ်ဖြစ်သည်။ ထိုအရာ၌လူသည်အသက်ရှင်။ လှုပ်ရှားတတ်၏။ လူသည် စုပေါင်း၍ လူခုနစ်ယောက်သို့မဟုတ်နိယာမများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသည်။ သေသောအခါလူသား၏မြင့်မြတ်သောအပိုင်းသည်မိမိကိုယ်ကိုလုံးဝရုပ်ဝါဒနှင့်ခွဲခြားသည်။ ထို့နောက်ဘုရားသခင့်နိယာမများ (သို့) အမျိုးသားများသည်ဘ ၀ တစ်လျှောက်လုံးအတွေးများနှင့်အပြုအမူများကသတ်မှတ်ထားသောအခြေအနေသို့မဟုတ်အခြေအနေတွင်နေထိုင်ကြသည်။ ဤမြင့်မြတ်သောမူများမှာစိတ်၊ စိုးလ်နှင့် ၀ ိညာဉ်တို့ဖြစ်ပြီးမြင့်မားသောဆန္ဒများဖြင့်ကမ္ဘာပေါ်ရှိသက်ရှိများဆုံးဖြတ်ထားသည့်စံပြအခြေအနေသို့ရောက်ရှိသွားသည်။ ဤအခြေအနေသည်ဘဝ၏အတွေးများသို့မဟုတ်စံနမူနာများထက်မမြင့်မားပါ။ ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများသည်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကျပ်အတည်းနှင့်အဆက်အသွယ်ပြတ်နေသောကြောင့်သူတို့သည်ဘ ၀ ၏ဆိုးသွမ်းမှုကိုသတိမပြုမိကြပါ။ သို့သော်သူတို့သည်သတိရှိလျက်နှင့်အဆုံးသတ်သောဘဝတွင်ဖွဲ့စည်းခဲ့သည့်စံနမူနာများကိုအသက်ရှင်နေထိုင်ကြသည်။ ဤသည်သည်အနားယူရာကာလဖြစ်ပြီး၊ လာမည့်နေ့၏လှုပ်ရှားမှုများအတွက်ကိုယ်ခန္ဓာနှင့်စိတ်ကိုကိုက်ညီရန်ညအချိန်တွင်အနားယူရန်လိုအပ်သကဲ့သို့ဝိညာဉ်၏တိုးတက်မှုကိုလည်းလိုအပ်သည်။
အာဒံရဲ့နဲ့ဧဝတို့ရဲ့တာဖြစ်ပြီး၏ theosophical အမြင်များဘာတွေလဲ?
ဤမေးခွန်းကိုဘာသာရေးပညာရှင်တစ် ဦး ဟုမေးလျှင်၎င်းသည်အပြုံးတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ အာဒံနှင့် Eve ၀ သည်ဤကမ္ဘာပေါ်တွင်နေထိုင်ခဲ့သည့်ပထမလူသားနှစ် ဦး ဖြစ်ခြင်း၏စိတ်ကူးကိုခေတ်မှီသိပ္ပံနည်းကျစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများက၎င်း၏အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့မှုတွင်ပြခဲ့သော်လည်း၊ မကြာခဏတက်လာတတ်၏။
ကောင်းစွာအသိပညာရှိသောသူသည်ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်သည်ဤပုံပြင်ကိုဒဏ္ableာရီတစ်ခုအဖြစ်ပြသသည်ဟုချက်ချင်းပြောလိမ့်မည်။ အဆိုပါသဘောတရားပညာရှင်ကဒီအချက်ကိုသဘောတူပေမဲ့လူသားမျိုးနွယ်ရဲ့အစောပိုင်းသမိုင်းကိုဒီဒဏ္myာရီဒါမှမဟုတ်ဒဏ္inာရီထဲမှာထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့ပြောခဲ့တယ်။ လျှို့ဝှက်အယူဝါဒကပြသခြင်းကလူ့မိသားစုသည်အစောပိုင်းနှင့်အစပြုခဲ့သည့်ပြည်နယ်တွင်ယောက်ျားများနှင့်မိန်းမများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းမဟုတ်ဘဲအမှန်တကယ်တွင်လိင်လုံးဝမရှိကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒါကတဖြည်းဖြည်းသဘာဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်နှစ် ဦး လိင်သို့မဟုတ် hermaphroditism, လူသားတစ် ဦး ချင်းစီအတွက်တီထွင်ခဲ့သည်။ ဒါကနောက်ပိုင်းမှာနေဆဲလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ခွဲခြားထားတဲ့သို့လိင်, တီထွင်ခဲ့ကြသည်။
အာဒံနှင့် Eve ၀ သည်ယောက်ျားနှင့်မိန်းမတစ်မျိုးမဟုတ်ဘဲလူသားအားလုံးကိုဆိုလိုသည်။ မင်းနဲ့ငါကအာဒံနဲ့Eveဝဖြစ်ခဲ့တယ်။ အာဒံနှင့်Eveဝတို့၏ပြန်လည်ဝင်ရောက်မှုများသည်မတူညီသောကိုယ်ခန္ဓာများ၊ နိုင်ငံများစွာနှင့်လူမျိုးများစွာမှတစ်ဆင့်လူ့ဝိညာဉ်၏ပြန်လည်ဝင်စားခြင်းဖြစ်သည်။
လူ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုသေဆုံးသည့် အချိန်မှစ၍ ဝိညာဏသည်ကမ္ဘာသို့မွေးဖွားလာသည့်နောက်တစ်ခြားသတ္တဝါဘဝသို့ရောက်ရှိသည်အထိနှစ်ပေါင်းတစ်ရာငါးရာခန့်ကြာပြီဟုဆိုသည်။ သို့သော်၎င်းသည်လူအားလုံးနှင့်အထူးသဖြင့်တက်ကြွသောစိတ်ထားရှိသည့်ခေတ်သစ်အနောက်တိုင်းသားနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
ကောင်းကင်ကိုအလွန်တောင့်တသူ၊ သူသည်ဤကမ္ဘာတွင်ကောင်းသောအကျင့်များကိုလုပ်ဆောင်ပြီးစံနမူနာကောင်းများနှင့်ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းမြင်သာသောစိတ်ကူးစိတ်သန်းရှိသောသူကောင်းကောင်းကောင်းကင်၌ထာဝရကာလကိုတောင့်တသူသည်အလွန်ကြီးမားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအထိကောင်းကင်ရှိကောင်းရှိလိမ့်မည်။ ပစ္စုပ္ပန်နေ့ကမသာမန်လူ။
ဤကမ္ဘာပေါ်ရှိဘ ၀ သည်အစေ့ကိုကြဲသည့်လုပ်ဆောင်မှုနယ်ပယ်ဖြစ်သည်။ Heaven ဆိုတာစိတ်ငြိမ်သက်မှုအခြေအနေတစ်ခုဖြစ်ပြီးစိတ်ဟာသူ့ရဲ့အားထုတ်မှုတွေဆီကနေအနားယူပြီးပြန်ဝင်စားစေမယ့်ဘဝမှာအလုပ်လုပ်တယ်။ စိတ်ကိုပြန်လည်နုတ်ထွက်စေသည့်အချိန်ကာလသည်၎င်းဘ ၀ ၌ပြုလုပ်ခဲ့ရာနှင့်ယင်း၏အတွေးကိုနေရာချထားခြင်းအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ အတွေး (သို့) မျှော်မှန်းချက်သည်မည်သည့်နေရာသို့ရောက်သည်ဖြစ်စေ၊ ထိုအချိန်ကာလကိုကျွန်ုပ်တို့၏နှစ်များဖြင့်တိုင်းတာရန်မဟုတ်ဘဲလှုပ်ရှားမှုသို့မဟုတ်အနားယူခြင်း၌ပျော်မွေ့ရန်စိတ်၏စွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့်ဖြစ်သည်။ တစ်ကြိမ်တွင်တစ်ခဏသည်ထာဝရဖြစ်ပုံရသည်။ နောက်ထပ်အခိုက်အတန့်သည်လျှပ်တပြက်နှင့်တူသည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အချိန်ကိုတိုင်းတာခြင်းသည်လာမည့်နေ့ရက်များနှင့်နှစ်များအတွင်း၌မဟုတ်ဘဲဤနေ့ရက်များ၊ နှစ်များကိုကြာရှည်စေခြင်းအတွက်တိုတောင်းခြင်းဖြစ်သည်။
ဝင်စားခြင်းအကြားကောင်းကင်ဘုံ၌နေရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ တစ်ခုချင်းစီကိုသူကခန့်အပ်သည်။ လူတစ် ဦး ချင်းစီသည်သူ့ဘဝတွင်နေထိုင်ကြသည်။ တစ် ဦး ချင်းစီသည်အခြားတစ်ခုနှင့်တစ်ခုနှင့်တစ်ခုကွဲပြားခြားနားသောကြောင့်အချိန်နှင့် ပတ်သက်၍ တိကျစွာဖော်ပြခြင်းမရှိသောကြောင့်တစ် ဦး ချင်းစီသည်မိမိ၏အတွေးများနှင့်လုပ်ရပ်များအားဖြင့်မိမိ၏အချိန်ကိုသူကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်သည်ဟုဆိုနိုင်သည်။ လူတစ် ဦး သည်တစ်နှစ်မပြည့်မီပြန်လည်ဝင်စားနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောဖြစ်သော်လည်းသို့မဟုတ်နှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာအတွက်ကာလကိုတိုးချဲ့နိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည်အဝတ်အစားဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့်၎င်းသည်၎င်း၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြည့်စုံစေပြီးမလိုအပ်တော့သည့်အခါပြောင်းလဲသွားသည်။ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုဒြပ်ထုများဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားခြင်းဖြစ်သည်။ ပုံစံ၏ပေါင်းစပ်ဖွဲ့စည်းခြင်း၊ ဘဝနိယာမအားဖြင့်ကာတွန်းကားခြင်း၊ ဆန္ဒဖြင့်ညွှန်ကြားခြင်းနှင့်မြှင့်တင်ခြင်း၊ ဤသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဟုခေါ်သည့်ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မွေးဖွားခြင်းမှသေသည်အထိနှစ်ပေါင်းများစွာတည်ရှိသည်; စိတ်သည်အလုပ်လုပ်ခြင်း၊ လောကနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုခြင်း၊ ထိုတွင်နေထိုင်သောဘဝကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သည့်ကိရိယာတစ်ခုအနေဖြင့်ဆောင်ရွက်ခြင်း။ သေသောအခါသူသည်ဤကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးကိုဘေးဖယ်ထားကာမြေကြီး၊ ရေ၊ လေနှင့်မီးတို့ကိုမှော်နှင့်ပေါင်းစပ်လိုက်သောမှော်အတတ်များသို့ပြန်သွားသည်။ ထို့နောက်လူ့စိတ်သည်ယင်း၏တည်ဆောက်မှုကိုခံစားပြီးနောက်၎င်းသည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိ၎င်း၏ပညာရေးနှင့်အတွေ့အကြုံများကို ဆက်လက်၍ အခြားကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးထဲသို့ ၀ င်ရောက်လာပြီးနောက်ငြိမ်ဝပ်စွာနေရသောအခြေအနေသို့ရောက်ရှိသွားသည်။